Tan-tsoroka ao anaty hamehana :: Sokajin'olona hafa hahazo 100 000 ariary mandritra ny roa volana • AoRaha
Nanome fanampiana dimy tapitrisa dôlara (manodidina ny 19 000 tapitrisa ariary) ho an’i Madagasikara ny fanjakana amerikana, amin’ny alalan’ny Fandaharanasa amerikana momba ny fampandrosoana (USAID). Hoentina hamahana olana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ateraky ny valanaretina Covid-19 izany.
Ankohonana 323 000 eto Antananarivo, Fianarantsoa, Moramanga, Taolagnaro, Toamasina ary Manakara, izay tsy mbola nahazo Tosika Fameno mihitsy, no hisitraka ny fanampiana. Ny Fandaharanasa momba ny fanjarian-tsakafo (PAM) no hitantana ny fitsinjarana izany.
Hahazo vola iray hetsy ariary isam-bolana, mandritra ny roa volana, ireo tokantrano hisitraka ny fanampiana ka ho laharam-pahamehana amin’izany ireo ankohonana ahitana olona sembana, ankizy, na beantitra, na olona miasa amin’ny sehatra tsy manara-dalàna.
Fantatra fa hahazo hafatra fohy amin’ny finday ireo tokantrano voafantina hisitraka ny fanampiana. Ho hita ao anatin’io hafatra fohy io ny kaody Western Union, ny toerana misy ny banky ary ny daty hakana ny vola, araka ny fanampim-panazavana hatrany.